Umphakathi uzakhele awawo ‘ama-speed humps’ ucasulwa ukushayiseka komuntu | News24
Umphakathi uzakhele awawo ‘ama-speed humps’ ucasulwa ukushayiseka komuntu
Cape Town – Izakhamizi ebezithukuthele ziveva ngoMgqibelo ebusuku zingenele umbhikisho ngemuva kokuthi itekisi ebelihamba ngesivinini esiphezulu lishayise laphinde labulala owesilisa ngesikhathi ewela umgwaqo eMew Way, emijondolo yaseNdlovini, eKhayelitsha.
IGroundUp ibika ukuthi imibhikisho iqhubekile ngempelasonto.
“Abahlali babhikishe ngentukuthelo ebusuku, benza i-speed hump sabo baphinde bavala nomgwaqo ngesiqukathi esithutha impahla, nesibuye sasisusa ekuhambeni kwesikhathi sase sasibeka ngale komugqa ophuzi,” kusho iphoyisa lomgwaqo elingafunanga ukudalulwa.
Isakhamuzi saseNdlovini, uMniniwo Dyifelt, uthe uThembile Matolo, obeneminyaka engu-37 ubudala, ubulawe itekisi ebelihamba ngesivinini esiphezulu.
OLUNYE UDABA: ISITHOMBE: Usindile ozame ukuzibulala ngokugxuma esuka esitezi efulethini
Uthi umshayeli ubalekile ngemuva kokubona ukuthi lo wesilisa useshonile.
Amaphoyisa akuqinisekisile ukushona kwalo wesilisa esigamekweni sokushayiswa maqede umshayeli wabaleka ngoMgqibelo ngabo-21:00.
Kube sekuvulwa icala lokubulala ngokungenhloso esiteshini samaphoyisa eLingelethu-West.
Izakhamizi zikubeke kwacaca ukuthi zifuna uMasipala waseKapa wakhe ama-speed humps.
Esinye sezakhamizi ebezibhikisha, uSisanda Kwaza, uthe, “Angeke sivumele izimoto ukuthi zihambe kulo mgwaqo kuze kube iDolobha lakha ama-speed humps.”
Okhulumela amaphoyisa uCaptain FC van Wyk, uthi umshayeli wetekisi ugcine ezifikele mathuba esiteshini samaphoyisa ngeSonto ekuseni nalapho kube sekuthathwa khona isitatimende.